मंगलबार दिउँसो पौने २ बजे छायानाथ रारा नगरपालिका वडा ७ पिनाटपने खोला क्षेत्रमा भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन क्षेत्रीका अनुसार २४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुगेको छ। २४ जनाको घटनास्थलमै, ४ जनाको उद्धार गरी ताल्चा विमानस्थल पुर्‍याउने क्रममा र नेपालगञ्‍ज पुर्‍याएका थप ४ जनाको मृत्‍यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेले जानकारी दिए । टायर पञ्चर भएको कारण मुगुमा बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
उनका अनुसार दुर्घटना गम्भीर घाइते भएका चारजना उपचारका क्रममा बाँकेको नेपालगन्ज मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ३२ पुगेको हो । उपचारको लागि पठाइएका १६ जना घाइते मध्येबाट चार जनाको मृत्यु भएको उनले बताए।चार जनाको उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। उपचारको लागि पठाइएका १६ जना घाइते मध्येबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। बस सडकबाट अन्दाजी दुई सय मिटर तल खस्दा अहिलेसम्म ३२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
कालिका ड्युलक्सको गाडी नेपालगन्जबाट सुर्खेत हुँदै मुगु जाँदै थियो। अहिले सो बसमा कति जना सवार थिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर सिट क्षमताभन्दा बढी नै यात्रु रहेको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले बताए। ‍दुर्घटना हुनुको एउटा कारण सिट क्षमताभन्दा बढी राखेकोले पनि भएको हुनसक्ने उनले बताए।अर्को कारण त्यहाँको बाटोको अवस्थाले गर्दा पनि कठिन भएको उनको भनाइ थियो। ‘ओभरलोड पनि भएको देखियो। सिटभन्दा बढी यात्रु देखियो,’ उनले भने, ‘मुगुको बाटो पनि नराम्रो भएको हुँदा त्यो भएको देखिन्छ।
अर्को टायर पञ्चर भएको कारण पनि दुर्घटना भएको हुनसक्ने उनले बताए।’त्यहाँ बोल्न सक्नेले भने अनुसार अगाडि ड्राइभर बस्ने पट्टिको ‘टाइर ब्रस्ट’ अर्थात पञ्चर भएपछि दुर्घटना भएको बताए,’ उनले भने, ‘घटनास्थलमा पुगेका डिएसपी साबले पनि हेर्दा त्यही कारणले भएको देखिन्छ भन्नुभयो।’ यद्यपि यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उनले बताए। यसमा थप अनुसन्धान गरी अरू कारण खुल्नेछन्।अहिले घाइतेमध्ये १२ जनाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ।नर्सिङ होम्समा १० जना र मेडिकल कलेजमा दुई जना छन्।
उनीहरूको अवस्था भने गम्भीर रहेको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले बताए। एक जना बालिकाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बालिका बोल्न सक्ने अवस्थामा छिन्। मृत्यु हुनेहरूको सनाखत पनि हुन नसकेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। तर अधिकांस छायानाथ रारा नगरपालिकाकै बासिन्दा नै हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। चालकको नाम मानबहादुर रावल भन्ने खुलेको तर अरूको खुल्न सकेको छैन।अरू विवरणहरू संकलन गर्ने काम प्रहरीले भइरहेको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगु, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासहितको उद्दारमा खटिएका छन्। ‍
Previous यी ५ युवती मध्ये कुन मनपर्यो ? एक छान्नुहोस र थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व
यी ५ युवती मध्ये कुन मनपर्यो ? एक छान्नुहोस र थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व
जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाएपछि’